QAREENKU WUXUU KU DHACAA BISADAHA LAGA BILAABO BOODADA, SHILINTA IYO DULINADA KALE, TILMAAMAHA ISTICMAALKA DAROOGADA, IYO WELIBA QIIMAHA CELCELISKA - GURI, GURI
Dhibco Qareen waayo bisadaha ay soo saaraan walaac Bayer (Caafimaadka xayawaanka Bayer) oo ku takhasusay soo saaridda xalalka cayayaanka ee xayawaanka.
Waxay wax ku ool u yihiin dagaalka, sida dibedda xayawaanka dibadda (caarada caarada, boodada) iyo gudaha (helminths).
Oo sidaas daraaddeed waxaannu u kala qaadannaa qorniinka; Qareen.
Halabuurka daroogada Qareen ficil ahaan ma kala duwanaan habka caanka ah ee caanka ah ee shirkadan Faa'idada badan. Sida dhammaan xalalka cayayaanka ee ay soo saartey Bayer Animal Health, waxay leedahay laba walxo firfircoon:
Imidacloprid cayayaanka Chloronicotinyl. Qaadashada xayawaanka cayayaanka, waxay hakad gelisaa gudbinta dareen-celinta dareemayaasha, iyo curyaanimada curyaanka ah ayaa dhimata.
Moxidectin compound semisynthetic waa xubin ka mid ah kooxda milbemycin.. Waxay jabisaa xiriirka muruqyada leh nidaamka dareenka ee dulin.
Dhibco ayaa ku jira 10% Imidacloprid iyo 1% Moxidectin. Qeybaha kaalmooyinka waa khamriga benzyl, carbonyl propylene, butylhydroxytoluene.
Qeybaha kala duwan ee daaweynta
Daroogadu way firfircoon tahay saxdo Sawirka Otodectes cynotis, taas oo ah dhagxaanta maqaarka iyo waa wakiilka keena ee maqaarka dhegta, boodada, caarada caarada, nematodoses iyo dirxiga. Waxaa loogu talagalay ka-hortagga caabuqa by nematode of dirofilaria genus, daaweynta iyo ka hortagga maqaarka dhegaha, cayayaanka, nematodos ee mindhicirka.
Faafinta dhogorta, boogta cayayaanka ayaa la tuurayaa meesha aan la awoodin inay leefiso walaxda firfircoon. Waxaa haboon in la dalbado inta u dhaxeysa garabka garabka.
Qiyaasta daaweynta ah ee bisadaha iyo bisadaha miisaanka ilaa 4 kg - 0.4 ml.
Bisadaha laga bilaabo 4 kg ilaa 8 kg - 0.8 ml.
Qiyaasta daaweynta ugu yar Miisaanka 0,1 ml / kg.
Ka soo horjeeda boodada:
Daaweyn hal mar ah. Haddii bisadu ay qabto dermatitis xasaasiyadeedkaasoo sabab u noqday shisheeyayaal, daroogada waa in la isticmaalaa bishiiba mar.
Waxaan daweyn karnaa qolka dhegta:
Daroogada waxaa la mariyaa hal mar. Koorsada waxaa lagu soo celin karaa bil gudaheed.haddii loo baahdo.
Waa muhiim! Ha ku ridin cayayaanka waxyeellada dhegaha.
Wixii daaweyn hal mar ah, si looga hortago - hal mar bishii.
Ka hortagga dirofilariasis:
Daroogada waxaa loo isticmaalaa ka hor intaan la duulin kaneecada mar, hal mar bishii.
Waa muhiim! Daroogadu ma awoodo in ay burburiso dirofilarii dadka waawayn, laakiin waxay yareyneysaa tirada mikrofilariae ee dhiiga baalasha.
Iska dhawra oo fiirso.
Waxaa jira tirooyin mamnuucaya:
Ketensiga hoos yimaada sagaal usbuuc, bisadaha jiran iyo soo kabashada ayaa isticmaala garyaqaan si adag waa mamnuuc.
Haddii bisadu miisaankeedu ka yar yahay kiilo, ka dibna habeynta, iyo sidoo kale daaweynta xayawaanka uurka leh iyo kuwa nuujinaya, waa in ay kormeeraan takhasus.
Ma ku dabbaali kartid bisad barkad furan (webiyada, balliyada, harooyinka) afar maalmood kadib daaweyn.
Waa mid aan la isku raacsaneyn in lala isticmaalo daroogooyinka ay ku jiraan makaasida antiparasititic (endectocides).
Hana dhaawacin haragga maqaarka qoyan.
Waa muhiim! Gacan-ku-dhac ku dhaca afka ayaa u horseedi kara dheecaan cagaarsho leh (dhibco dhadhan qadhaadh), xanuunka neerfaha wakhtiga gaaban. Calaamadaha qaabka mataga, casaanka maqaarka, finan, cuncun aan laga reebin. Waxay isu gudbaan, daaweynta looma baahna.
U hubso inaad raacdo sharciyada xakamaynta cayayaanka!
Haddii ay dhacdo in la cuno cayayaanka - la xiriir takhasusle.. Kulan la qaado talooyin ku takhasusay daroogada. Tani waxay u oggolaanaysaa inuu si degdeg ah oo sax ah u magacaabo koorsada daaweynta.
Iska ilaali xayawaanka la daweeyey carruurta maalin dhan..
Gaadiidka iyo baakuumada qashin qubka.
Qiimaha iyo tayada
Daawada lama magacaabi karo miisaaniyad. Tritubas 0.4 ml Waxaa loogu talagalay bisadaha miisaankeedu yahay 4 kg wuxuu ku kacayaa 800-900 roon.
Baako daroogada loogu talagalay xayawaanka 4 ilaa 8 kg waxay ku kici doonaan iibsadaha iman kara 950-1000 Rug. Waxay leedahay saddex tuubo oo calaamado ah 0.8 ml.
Qiimaha sare ayaa si buuxda loo siiyaa:
Waxtarka laga tago.
Tayada loo damaanad qaaday shirkad caalami ah oo daryeel caafimaad oo caalami ah.
Noocyo badan oo ka mid ah ficilka daweynta.
Daroogada ayaa caan ku ah macaamiisha curyaanka ah. Ma jiraan dib-u-eegisyo dhanka webka, marka laga reebo cabashooyinka ku saabsan qiimaha. Laakiin maxaadan u sameyn karin xayawaankaaga.